Shirkadda ALNuuR Furniture oo Shaacisay Fursado muhiim ah ‘Farxadda Gu’ga iyo Toddobaadka Qoyska’ | Saxil News Network
Shirkadda ALNuuR Furniture oo Shaacisay Fursado muhiim ah ‘Farxadda Gu’ga iyo Toddobaadka Qoyska’
April 14, 2015 - Written by admin
Hargeysa, Isniin, Shirkadda qalabka guryaha iyo agabka xafiisyada ee ALNuuR Furniture ayaa markii ugu horreysay shaacisay barnaamij cusub oo loogu walqalay ‘Farxadda Gu’ga iyo Toddobaadka Qoyska’.
Haddii aad iibsato Cunto waxaad abaalmarin u heli doontaa Tallaagad.
Haddii aad iibsato Hurdo waxaad abaalmarin u heli doontaa Qasaalad.
Haddii aad iibsato Fadhi waxaad abaalmarin u heli doontaa Muraayad Flat Screen ah.
Ugu dambayntii, waxaannu guud ahaan macaammiishayada ugu baaqaynaa inay ka faa’iidaystaan fursaddaa kooban ee aannu u samaynnay.”